Posted by ကိုလူအေး at 10:03 AM
ဓာတ်တိုင် May 20, 2008 at 12:29 PM
Anonymous May 20, 2008 at 1:48 PM
၁၉၉၈ တုန်းကတော့ အဲဒီနေရာကြီး... ကျောင်းတော်ကြီးက ဒီလောက်လွမ်းစရာကောင်းမယ်မထင်ခဲ့မိဘူး...။
ကျောင်းပြီးသွားတော့လည်း.. အဲဒီနေရာမှာ ဘာအမှတ်တရမှ ပြောလောက်စရာကောင်းအောင် မကျန်ရစ်ခဲ့ဘူး ... ( ကိုယ်တိုင်က သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ သိပ်နည်းခဲ့လို့ပါ .. ) လို့ ထင်ထားခဲ့တယ်...။
၂၀၀၈ မှာတော့ အဲဒီနေရာက ... အဲဒီတုန်းက ကျောင်းသားဘ၀ ကို တအားလွမ်းနေမိပြန်တယ် ...။
သူငယ်ချင်းများအားလုံး အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ...။
P.s. အရင်တုန်းက T3၊ T4 .. နံရံတွေပေါ်မှာ ... စာသင်ခုံတွေ ပေါ်မှာ .... ဆော့ကစားနေတဲ့ လက်တွေ အွန်လိုင်းပေါ် ပျော်နေရှာရော့ပေါ့ ... just kidding !!! :P
ူသူငယ်ချင်းအားလုံးကို သတိရပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
Anonymous May 20, 2008 at 2:41 PM
ကျောင်းတုန်းက အလှူလုပ်တဲ့ အကြောင်းတွေကို Post တစ်ခု ရေးမလို့ဟာကို ပြောင်ကြီးက ဦးသွားတယ်။ နောက်မှ သူရေးဖို့ ကျန်ခဲ့တာတွေ ထပ်ရေးတော့မယ်။
မောင်ဖြူ May 20, 2008 at 3:03 PM
၂၀နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအနေနဲ့ အရင်တုန်းကရေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့် postလေးကို link ပြန်လုပ်လိုက်ပါတယ်။
thazinei May 20, 2008 at 5:14 PM
ဆယ်နှစ်တိုင်တိုင် ကားတားနေဆဲ သူငယ်ချင်းများသို့.... အဆင်ပြေဆုံး ကား အမြန်ဆုံး ရကြပါစေ...
သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို သတိရလျှက်ပါ...အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ...။ ကျော်သီဟ (ငပိန်)
pingu May 20, 2008 at 5:34 PM
Let me write in English coz myanmar font hasn´t been installed in my PC....
I really miss my friends and those days....and so sorry for two of them passed away so early.....
I am also the one who came back to stay in our place for the second time for quite along time....happy and sad days we all passed through......
but wish you all to be happy and get what you want in lives....
and hope to keep in touch many many years over.......
Anonymous May 20, 2008 at 10:20 PM
I remember all about this especially when i feel upset .
and sometime when i saw students.
I wanna advice u all we sh do some party like dinner on the following5or 10 yr anniversary.
I THINK we all can do whatever we want to do on that day.
no matter what happened, thanks alots for the founders & writers who can try to take out from our hearts what already have been.
wypoe May 21, 2008 at 2:27 AM
During the last 10 years, I was really joyful in suchastudent life at MTU. Whenever I met any difficulties or challenges it reminds me our good times at MTU. It is an unforgettable memory. Although it cannot happen in reality, I wish to get it again. Hopefully we will meet atagathering party at least.
မေအောင် May 21, 2008 at 7:31 AM
သူငယ်ချင်းအားလုံးကို သတိရပါတယ်။ အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေပြီး ရောက်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။ ဆုံးသွားတဲ့ မေဂျာတူသူငယ်ချင်းအတွက်လဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
hanthar.mon May 21, 2008 at 12:58 PM
I miss that time so much!
Can i get that time again?
Anonymous May 21, 2008 at 1:43 PM
I'm also miss u.
ShweNaw May 21, 2008 at 4:21 PM
အားလုံး ကို သတိရတယ်။
ဒါပေမယ့် အသက်မရှိတဲ့ အရာတွေကို တော့ မလွမ်းတတ်ပါဘူး။
အားလုံးကိုတော့ ခင်တယ် ။ လွမ်းနေပါတယ်လို့ ။
အားလုံးဟာ ကံဇာတ်ဆရာအလိုကျ ဖြစ်နေပျက်နေကြတာချည်းပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ကံ ဆိုတာ အလုပ်လို့ ဆိုပြန်ရော။
အဲဒီတော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကံကောင်းကံဆိုး ဖြစ်နေကြတယ်လို့ 
တော့ တို့ ထင်တာပဲ။
အဲဒီတော့ ကံကောင်း အောင် ကိုယ်လုပ်မယ့် အလုပ်ကို မလုပ်ခင် သေသေချာချာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီး
k4 May 22, 2008 at 11:28 AM
တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်နေတိုင်း MTU မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ခဲ့ရတာကို တမ်းတမိတယ်
အားငယ်တဲ့အခါတိုင်းလည်း ၀ိုင်းဝန်းအားပေးတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို လွမ်းတယ်
၁၀နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး အိုးဝေမှာ ဆုံတွေ့ရတာ အရမ်းပျော်ပါတယ်
နောက်နှစ်တွေမှာတော့ MTU မြေမှာ သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်ဆုံနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ
Anonymous May 22, 2008 at 4:39 PM
၁၀ နှစ်မြောက်မှာ MTU ကျောင်းတော်ထွက်တွေ
o-way မှာ gathering လုပ်တယ်...။ ၁၁ နှစ်.. ၁၂ နှစ်မြောက်ဆိုရင် ဘယ်မှာ gathering လုပ်မှာလဲ ..။
တင့်တင့်စန် ( any question )
မောင်ဖြူ May 22, 2008 at 5:08 PM
နောက်တစ်ကြိမ်ကတော့ ကိုဇနိ၊မဇနိတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ မကောင်းဘူးလား :P
သဘောတူတဲ့သူလက်ခုပ်တီးပါဗျို့။ သဘောမတူတာမရှိဘူးဆိုရင် ငြိမ်နေကြပါ။ :D
k4 May 22, 2008 at 5:13 PM
တူပါတယ် (ဖြောင်း) power infinity
Anonymous May 24, 2008 at 1:54 PM
တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့တတွေ တစ်နေရာတည်းမှာ တစ်ပြိုင်တည်း ပြန်ဆုံတွေ့ကြရမယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ မျှော်လင့်ထားတယ်။ MTU ကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာ မဟုတ်ခဲ့ရင်တောင် ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘ၀က အလှူလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းလေးမှာ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။
အမှတ်တရ ကုသိုလ်ဒါနလေးပြုရင်း သူငယ်ချင်းတွေပြန်ဆုံ ကြမယ်လေ။ ဒီအလှူပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့ကို ကိုပြောင်ကြီးနဲ့ စစ်ကိုင်းသူတို့က ကမကထပြု ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ :D
စစ်ကိုင်းသူ May 24, 2008 at 6:18 PM
တချိန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပြန်ဆုံဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ မန္တလာမြေမှာပေါ့။ အဲဒီနေ့ကို အရမ်း မျှော်လင့်ထားတယ်။ မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာမှာလဲ ကြောက်တယ်။
Anonymous May 27, 2008 at 7:15 PM
ုစာတွေ တ၀ကြီးဖတ်လိုက်၇လို. တခါမှလွမ်းမယ်မထင်ထားတဲ့ MTU ကို တော်တော်တောင်လွမ်းသွားတယ်....
whoo...so tired trying to type mm font.:(
Anonymous May 29, 2008 at 11:02 PM
စောစောက အကြောင်းမကြားကျဘူးးး အမီပြေးလာမှာပေါ့... ရန်ဖြစ်လို့ဝသေးဘူး... ကျောင်းထဲရောက်သွားရင်.. တမျိုးပဲလွမ်းသလိုခံစားရတယ်.. အခုလိုအစပျိုးပေးတဲ့သူကိုတော့ တော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... ဘော်ဒါမများပေမယ်... အခုပြန်ဆုံတော့ တကယ်ကို ငယ်ပေါင်းတွေနဲ့တွေ့ရသလိုပဲ.... ပျော်တယ်ဗျို့.............. ကြံချောင်း(ခ)ကျန်ကျောင်း....ခိခိ
Anonymous May 31, 2008 at 5:46 AM
Anonymous May 31, 2008 at 5:47 AM
Drinking time tay ko .. yae ohn ko tun ya ...
Anonymous June 7, 2008 at 4:47 AM
သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုပြန်ဆုံချင်သေးတယ်… တနေ့နေ့ပေါ့….. ကျောင်းသားဘ၀က တကယ်လွမ်းစရာ
gental81 March 18, 2009 at 4:21 PM
comment ထဲက သဇင်အိ က ဇီးကုန်းကလား ...